Ubi vaịn French nke Occitanie
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ubi vaịn French nke Occitanie
Na-agbasa News Travel • culinary • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
A na-ewere Occitanie dị ka otu n'ime Kacha ọhụrụ French wine mpaghara ọ dịkwa naanị awa 2 site na Barcelona. Aha maka mpaghara ahụ na-ezo aka nnukwu mpaghara ndịda Europe ebe ndị mmadụ na-asụ asụsụ Latịn a na-akpọ Occitan. Mpaghara ubi vaịn a nke France kpuchiri ókèala yiri nke Touts nke Count na-achị na narị afọ nke iri na abụọ - nke iri na atọ wee nye oke osimiri Mediterenian n'akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ yana n'akụkụ Provence-Alpes-Cate d'Azur n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, Auvergne-Rhome Alpes na northeast, Nouvelle-Aquitaine na odida anyanwu ya na northwest ya na Andorra na Spain no na ndede ala ya na mba ofesi. Mpaghara a bụ otu n'ime mmanya mmanya kacha ochie n'ụwa, nwere ubi vaịn Greek ndị edere ede si na narị afọ nke ise BC.
Mpaghara ahụ jikọtara agbata obi Languedoc-Roussillon na Midi-Pyrenees, ọ bụkwa Montpelier, Toulouse na Perpignan. Nke a bụkwa ebe amụrụ nke mmanya na-egbu egbu (1531), n'obodo Limoux, nke ndị mọnk mepụtara na Abbaye de Saint-Hilaire, afọ 150 tupu ọmụmụ Dom Perignon bụ onye webatara mgbukepụ na mpaghara nke mere ka ọ bụrụ ama - Champagne. Ọ bụ Thomas Jefferson na-amịpụta mmiri ahụ ma ọ bụ naanị mmanya na-egbu maramara n'ime ụlọ Jefferson.
A mara ama Languedoc-Roussillon, dị ka “ọdọ mmanya” nke obodo ahụ n'ihi na ọ na-emepụta ọtụtụ ọtụtụ mmanya maka ndị agha France n’oge WW1. Ruo ọtụtụ afọ, o mere mmanya kachasị ọnụ ala nke mba - maka ndị agha. N'ụzọ dị mma, mgbalị ndị a na-adịbeghị anya lekwasịrị anya na mma karịa ọtụtụ, na ịivea ntị ugbu a enweela ihe ịga nke ọma. Mpaghara ugbu a gụnyere 549,194 nke ubi vaịn (karịa ala karịa Australia niile), na-emepụta lita mmanya 327,360,000 (pasent 75 na-acha ọbara ọbara, 13 pasent na-acha ọcha, pasent 8 bilitere, na 2 pasent na-egbuke egbuke ma sie ike). N'ime mmanya ndị a, enwere mmanya 36 AOC (29 na-acha uhie uhie, ọcha na rose, 3 na-enwu gbaa na 4 ụtọ).
Mkpụrụ vaịn ndị a kụrụ n'ọtụtụ ebe bụ: Cabernet Sauvignon, Carignan, Cinsault, Merlot, Mourvèdre, Syrah, Grenache (noir na blanc), Muscat, Bourboulenc, Clairette, Mauzac na Picpoul. Ala ndị ahụ bụ schist, sandstone, scree, limestone, ụrọ na aja-aja. Ihe ngosipụta ama ama gụnyere Muscat de rivesaltes, Blanquette du Limoux, mmanya na-egbu maramara, Corbiere, Minervois, Saint-Chinian, Pic Saint-Loup, Picpoul de Pinet na Colioure.
Gụ akụkọ zuru ezu na WINES.TRAVEL.